Amaqhinga ama-4 wokuhlanza izitsha zokuhlanza | Bezzia
Amaqhinga ama-4 wokuhlanza izitsha zokuhlanza
Ukuhlanza ikhaya, kusetshenziswa izinto ezahlukahlukene zokuhlanza, amapayipi wokuklwebha, izindwangu, izindwangu nemishanelo esiza kakhulu. Kepha wonke lawo mathuluzi aqoqa amabhaktheriya futhi akuchithe lokho uma zingahlanzwa, zisatshalaliswa ngaphezu kwekhaya. Okungangabazeki ukuthi akuyona inkinga yenhlanzeko kuphela, kepha ingaba yinkinga yezempilo.
Kungakho ngayinye yalezi zitsha idinga ukuhlanzwa kwayo njalo. Kungaleso sikhathi kuphela, lapho ungaqinisekisa khona ukuthi uhlanza indlu yakho kahle. Ngoba akusizi ukwenza imizamo yokuba igumbi ngalinye lihlanzeke, libukeke futhi libulawe amagciwane, uma usebenzisa izinto ezigcwele ukungcola. Uma ufuna ukwazi ukuthi ungazihlanza kanjani kalula izinto zokuhlanza endlini yakho, qaphela izeluleko ezilandelayo.
1 Ungazihlanza kanjani izinto zokuhlanza
1.1 Ungawuhlanza kanjani umshanelo oshanayo
1.2 Ukuhlanza i-mop
1.3 Iziponji nezikhuhli
1.4 Ungazihlanza kanjani izindwangu nezindwangu
2 Ukuhlanza izinto zokuhlanza, okuyingxenye yenqubo yokuhlanzeka
Ungazihlanza kanjani izinto zokuhlanza
Uma ungumuntu othanda Abangane, uchungechunge lwethelevishini oluheha abalandeli abaningi nsuku zonke eminyakeni engama-20 ngemuva kokuqala kwalo, uzokhumbula ukuhlanzeka kwe-maniac par ubuhle, uMonica. Kwesinye seziqephu zokugcina, lo mlingiswa uhlanza ngomshini wakhe wokuhlanza bese usebenzisa esincanyana ukuhlanza esikhulu. Isigwebo sakhe sokugcina sithi, ngifisa ukuthi kube khona encane yokuhlanza lokhu.
Yize ngaleso sikhathi kwakuyinkulumo ehlekisa kunayo yonke kwabaningi abakuchungechunge, iqiniso ukuthi ngaphandle kokudlulela ngokweqile, kubalulekile ukuhlanza isitsha ngasinye. Lapho usebenzisa i-vacuum cleaner yakho kufanele uthulule ithangi, ngaphezu kokudlulisa indwangu emanzi ezingxenyeni zayo.
Ungacabanga ugcina ithuluzi lokuhlanza uthuli, eligcwele uthuli, ekhabethe? Akunangqondo, kwesokudla. Yebo, kwenzeka okufanayo ngakho konke okunye. Ngalezi zingoma ukuhlanza amacebo, ungahlanza izinto zakho zokuhlanza ngokushesha, ngaphandle kokuzifaka njalo.
Ungawuhlanza kanjani umshanelo oshanayo
Thola ikama elijiyile noma ibhulashi elidala, lizokusiza ukususa ukungcola okunqwabelene phakathi kwamabhulashi webhulashi lokushanela. Ngemuva, lungisa isitsha esikhulu samanzi afudumele kanye ne-splash ye-detergent. Cwilisa umshanelo bese uwuyeka ungene cishe imizuzu engama-20. Ukuqedela, hlambulula ngamanzi bese uyomisa emoyeni ovulekile bese ubheke phansi, ukuze ama-bristles angakhubazeki.
Okungenani kanye njalo emavikini amathathu kufanele kuhlanzwe imophu. Kufanele nje gcwalisa ibhakede ngamanzi afudumele nesisuli sokuthambisa amafutha, njengomshini wokuwasha izitsha. Vumela ukuthi icwilise isigamu sehora bese ukhipha i-mop kahle. Yibuyisele emanzini ahlanzekile, bese ucwilisa umuthi kaningana ukuze ususe ukungcola nensipho.
Ama-scouring pads aqoqa imfucumfucu yokudla engaholela kumagciwane ayingozi empilweni. Zihlanze kahle ngemuva kokukhuhla, uzigqoke cwilisa ngamanzi ashisayo, i-baking soda, neviniga emhlophe yokuhlanza. Bazohlanzeka futhi babulawe amagciwane.
Ungazihlanza kanjani izindwangu nezindwangu
Lungisa isitsha ngamanzi afudumele, inkomishi yesoda yokubhaka, enye uviniga wokuhlanza omhlophe nejusi kalamula. Vumela ukuthi icwilise imizuzu engama-30, ngemuva kwalesi sikhathi, gcoba indwangu ngayinye kahle, hlambulula ngamanzi ahlanzekile bese uvumela umoya wome. Ungazifaka nasemshinini wokuwasha, yize kunganconyiwe ukuthi uhlanganise izindwangu zokuhlanza nezingubo, ngakho-ke kungaba izindleko ezingadingekile zamandla nezomnotho.
Ukuhlanza izinto zokuhlanza, okuyingxenye yenqubo yokuhlanzeka
Uma ukwenza umkhuba ukuhlanza amathuluzi wakho wokuhlanza njalo emva kokuwasebenzisa, ungawagcina ehlanzekile ngendlela elula kakhulu. Ukuvumela ukungcola kunqwabelene kuphela ekusabalaliseni kuyo yonke indlu. Kepha futhi ukwenza umsebenzi wokuhlanza nokubulala amagciwane ngokulandelayo kube nzima. Gcina indlu ihlanzekile kahle futhi unamagciwane ikusiza uzizwe ukhululekile futhi unethezekile ekhaya lakho.
Faka imizuzu embalwa kunqubo yakho yokuhlanza ukuze uhlanze izitsha oyisebenzisile. Indlu yakho izohlanzeka, uzogwema amagciwane kanye namanye amabhaktheriya ayingozi. Futhi ngaleyo ndlela, uzokwazi ukuba nekhaya elinethezekile nelifanele ukuphumula nokuzola kwakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Amaqhinga ama-4 wokuhlanza izitsha zokuhlanza
Ama-movie ayisi-6 okuqala ukuwajabulela ngo-Agasti
Ukudla okungu-4 okuyingozi kakhulu ehlobo